Ghana: Harmattan indray, Fanjakazakan’ny Vola Ghaneana, Nahoana no te-hiala ireo mpiasa Ghaneana, ary dingana 82 hanavaozana visa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Oktobra 2018 21:42 GMT
Miaina harmattan i Ghana amin'izao fotoana izao, ary nahatonga ny fanehoan-kevitr'i Leanne, ao amin'ny An American in Africa, izay manazava ny momba ny harmattan, izay faritany toy izao izany:
rivotra maina sy vovoka be manidina manerana ny morontsiraka avaratra andrefan'i Afrika. Ny vanim-potoany, dia faritany fa “miseho matetika ny volana Desambra ary mamokatra be ny volana Martsa.
Ny “Harmattan” dia tena “mikorontana”, mandrakotra ny fiara amin'ny “loto manify” ary “voaloton'ny fasika avaratr'i Afrika ny tokontany taila (carreau).” Saingy tamin'ity fotoana ity, nilaza ireo mpamantatra ny toetandro ao Ghana fa avy any Eoropa Atsinanana izy ity.
Rob Taylor, bilaogera Kanadiana ao Ghana manoratra ao amin'ny bilaoginy A Canadian Couple Relishes Acronyms, amin'ny fombany mahatsikaiky, mitanisa ny sakana amin'ny fahazoany ny pasipaorony nohavaozina any Ghana, zavatra iray izay mila dingana tsy latsaky ny 82 mba hahazoana azy! Tamin'ny fotoana nahazoany ny visa, nanoratra izy fa nahatsapa:
voaray tanteraka ao Ghana (amin'ny fotoana hialana indray)!
Mandritra izany fotoana izany, Elodie, Belza mpianatra asa ao amin'ny OXFAM Ghana, ao amin'ny bilaogy Akwaaba in Ghana, Gate (Get) to Africa!,!, manoratra lahatsoratra mpandinika sy ara-filozofia amin'ny teny Frantsay momba ny zavatra eritreretiny fa nianarana tao Ghana sy Afrika nandritra ny herintaona nandalovany:
Nanome fahafahana ho ahy hisokatra amin'ny olom-pantatro maro i Afrika [manokana, ara-tsosialy sy matihanina]; Eo i Eoropa mampahatsiahy ahy ny maha izy ahy sy ireo olona izay toa akaiky ahy indrindra maharitra ela.
Mbola manana zavatra betsaka omena ahy i Ghana – sy Afrika, raha hitarina. Angamba koa manana omena izaho manokana – mino aho
Farany, satria mankalaza ny jobilliny volamena i Ghana, dia miomana koa izy amin'ny fanomezana anarana indray ny cedi Ghaneana, bilaogera Ghaneana Emmanuel.K.Bensah, ao amin'ny Trials and Tribulations of a Freshly-Arrived Denizen…of Ghana, kosa midera ny Banky ao Ghana noho ny bokikely navoakany isa-tapa-bolana ho an'ireo mpamaky ny Daily Graphic ary ahitana ny antsipiriany momba ny vola vaovao avoaka miaraka amin'ny vola efa misy ao Ghana, ny cedi, amin'ny volana jolay amin'ity taona ity.
Emmanuel nanoratra hoe:
Raha ny tena izy, hatramin'ny fanambarana ny fanomezana anarana indray ny cedi Ghana tamin'ny faran'ny taona lasa, ny 10.000 cedi Ghaneana dia ho lasa 1 NEW cedi Ghanena manomboka amin'ny volana jolay amin'ity taona ity, maromaro ireo dokambarotra fampahafantarana tamin'ny radio, sy sora-baventy (saiky maharitra) eo amin'ny pejy voalohan'ny gazety Daily Graphic, sy gazety hafa mba hahafahan'ny vahoaka ho zatra amin'ny “fiovana”
Bilaogera Ghaneana monina any Etazonia kosa mandinika momba ny mpiasa Ghaneana, sy ny lafiny “mampiditra” sy “mandroaka” izay manakana ny fanirian'ny Ghaneana hijanona ao Ghana sy hiasa ao amin'ny firenena. Hoy izy nanoratra:
Manomboka manintona ireo mpiasany sasany mba hiverina ny fahombiazan'i Ghana. Farafaharatsiny, maro ireo olona fantatro izay miresaka momba ny fiverenana any Ghana. Saingy ao Ghana, misy ny antony lehibe “mandroaka” hitako. Tsy ny karama ambany ihany amin'ny resaka vidim-piainana, fa koa tsy omena karama ara-potoana ny mpiasa, na indraindray aza tsy mahazo karama mihitsy, ary anisan'izany ireo mpiasam-panjakana, indrindra any ivelan'ny renivohitra. Maro ireo olona manam-pahaizana sy mazoto ao Ghana. Saingy raha tsy afaka mahazo fivelomana izy ireo, na dia manana asa aza, dia lasa voasarika kokoa amin'ny fandaozana an'i Ghana.
Angamba, angamba, ny fifanojoan'ny fankalazan'i Ghana ny Jobily Volamenany sy ny fanomezana anarana indray ny cedi Ghana dia mety hahatonga ireo Ghaneana hijanona an-tanindrazana? Ny fotoana ihany no hilaza.